Home Wararka Kheeyre oo Beesha waceeysle u diiday in ay u Tartamaan Gudoomiye Baarlamaan...
Kheeyre oo Beesha waceeysle u diiday in ay u Tartamaan Gudoomiye Baarlamaan (Aqriso sababta)
Shalay waxaa lasoo xulay intooda badan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Gal-mudug kuwaasi oo looga dhawaaqay Magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta Maamulkaasi,waxaana durba soo baxaya isqabqabsi xoogan iyo awood sheegasho halkaasi ka dhacday.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaana hadana soo baxaya Warar sheegaya in R/wasaare xassan cali kheeyre uu diiday mid ka mid ah Xildhibaanada 8-da ah ee Beesha waceeysle in lagusoo daro Liiska xildhibaanada Maadaama laga baqdin qabo in uu isku sharaxo gudoomiye baarlamaan.
Sida MOL ogaatay waxaa arrinkaan R/wasaare kheeyre u soo maray C/risaaq Xusul oo ah xubinta gudigga farsamo ku matasha Beesha waceeysle iyadoo loo balanqaaday in Xildhibaan heer federaal laga dhigaayo hadii uu diido in Cabdi naasir lagusoo daro Liiska Xildhibaanada.
Arrinkaan ayaa si aad ah usii cadeeyneeysa in Kheeyre uusan ogoleeyn in Gal-mudug wax xil ah oo muuqda laga siiyo beesha waceeysle waxaana uu horay u yiri”Hadii shalay xassan shiikh qadiyay beeshiisa anigu ma qadin doono beesheeyda”
Maxamed Nuur Gacal oo u dhashay beesha Murusade ayaa loo wada gudoomiyaha Baarlamaanka waxaana wata R/wasaare kheeyre,waana sababta loo diiday Cabdi naasir oo waxaa laga baqdin qabaa in uu la tartamo.
Odayaasha dhaqanka beesha waceeysle ee ku sugan dhuusa-mareeb ayaa si aad ah arrinkaan uga carooday,waxaana la filan karaa go’aan ay qaataan saacadaha soo socda sida aan xogta ku heleeyno